I-manicure, iPedicure | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Ukucoca, ukuguqulwa
Ngaba kukho umehluko omkhulu phakathi kwe-CND Shellac kunye ne-OPI Gel Color?
Ngaba ukhona umahluko omkhulu phakathi kweCND Shellac kunye ne-OPI Gel Colour? Ndijoyina impendulo yangaphambili. Ifomula pro i-varnishes efanelekileyo ye-gel ye-gel ye-varnish kudala yaphela. Ngoku…
Ndixelele ukuba ndingabetha njani abathengi kumntu oqala umququzeleli? Ndiyayixabisa imimiselo yakho ebomini.
Ndixelele ukuba ungatsala njani abathengi kwi-novice manicurist? Ndingavuya kakhulu ngemizekelo yobomi. Umzekelo wam. Emva kwezifundo zokuqala, ukuthelekisa into endiyenzayo nento onokuyibona ...
Ziziphi iindiza okanye uncedo kumanimari
yintoni amachaphaza okanye amachaphaza emaniyur amachaphaza-sisixhobo sokwenza uyilo. Ngoncedo lwayo, amanqaku okobubanzi obahlukeneyo athatyathiweyo, ukuchukumisa kwamachaphaza emva koko kwenza inqaku elincinci xa kuthelekiswa
Ungasusa njani izipikili ezongezelelweyo?
ususa njani iinzipho ezandisiweyo? eSalon Kububudenge ukuthatha kwaye uzisike ngokwakho okanye uye esalon, baya kukunciphisela Thatha izipikili okanye isikere kwaye usike iinzipho zobuxoki ...
Amantombazana kungakanani ukumisa kwisibane segel?
Amantombazana yimalini eyomileyo kwipolishi yesibane sejel? ukusuka kwimizuzu emi-3 ukuya kweli-10, kuxhomekeke kweyiphi ivanishi kwaye zingaphi kuyo kwizikhonkwane imizuzu emi-2 kwisibane se-UV kunye nemizuzwana engama-30 ...
Kutheni iindlebe zam zivumba xa zihlamba, nangona ndihlamba iinyawo zam imihla yonke?
Kutheni iinzwane zam zinuka kakubi xa zisikwa, nangona ndihlamba iinyawo zam yonke imihla? Kwaye baqaphela apho bakhula khona, ayizizo iinzipho ezinukayo, kodwa ziqokelelana phantsi ...
Ukuqiniswa ne-biogel okanye i-acrylic?
Ukomeleza nge-biogel okanye i-acrylic? Ndiyathanda ukomeleza nge-biogel ngakumbi - iyoluka kwaye iyagoba kwiimpembelelo, endaweni yokuqhekeka. Ukuba inkosi yokuqala ineengxaki nge-bio, ke kufanelekile ...
Ngubani owaziyo amachashaza amnyama avela kwiikhonkwane?
ngubani owaziyo unobangela wamachaphaza amnyama ezipikili? Kwiinzipho zakho? okanye NGAPHANTSI kwezikhonkwane? ukuba iphantsi, ibonisa ukuba azonelanga iivithamini, ngakumbi i-calcium, iinzipho zibuthathaka ...
Indlela yokwandisa iplani yepiyile?
indlela yokwandisa ipleyiti yesikhonkwane? musa ukusika ukuya ku-zero, injenge-micronychia. Umda wasimahla kufuneka uhlale uhlala, kwaye ukhetha ixesha elide kunelifoto Wow, yintoni, kwaye ngaphandle kwethu ...
Ndifuna ukwenza i-manicure ekhaya. apho uqala khona, phi ukufumana abathengi?
Ndifuna ukwenza i-manicure ekhaya. ukuqala ngaphi, ukufumana phi abathengi? UKoshka Umnaja uchanekile kodwa bendingafuni ukwenza i-manicure, ndiyenzile kubahlobo bam amaxesha ambalwa, yabhabha ngephanyazo =) ngokungalindelekanga! UKUSUKA…
Shellac okanye i-gel ipolish
I-Shellac okanye i-shellac ye-gel polish yinto ephambili ye-gel polish. Ziyahluka kwindlela yesicelo (ndithetha ngokugcwalisa kwangaphambili), ukuhlala ixesha elide, imibala kunye nokususwa (i-shellac isuswa ngokulula, kodwa ...
Yenza njani ekhaya ukwenza ulusu lube lula kwaye luphephe
Uyenza kanjani ulusu lwezandla zakho zithambe kwaye zi-elastic ekhaya Akukho nzima ukukhathalela ulusu lwakho ekhaya ukuba ulandela iingcebiso ezithile. Ezinye iingcebiso ngononophelo lwesandla ...
lithini igama lesikhonkwane esikhethekileyo kwabo baluma iinzipho zabo ... Andikwazi kulumula umntwana
ngubani igama lesikhonkwane esikhethekileyo kwabo baluma iinzipho zabo ...
Ngaba ndinokufumana i-HIV ngokwenza umquba?
Ngaba ungayifumana i-HIV ngelixa ufumana i-manicure? Intsholongwane kaGawulayo yintsholongwane engazinzanga kakhulu ... emva koko, ukuze wosulelwe yi-HIV, udinga inani elithile leeseli zentsholongwane, hayi inyani yokuba bezikule nombolo ...
Iifingernails okanye izipikili ziqhekeza kakhulu, zitshintshe. Yintoni endiyenzayo?
Izipikili zaphuka kakubi, zikhuphe kakhulu. Kwenziwe ntoni? thambisa iinzipho zakho yonke imihla nge-tincture enxilisayo ye-calendula (ethengiswa kwii-pharmacy). Izikhonkwane ziya kukhula zize zomelele. Iiamangile zilungele iinzipho. Iyacetyiswa ...
Ngaba izibani ze-ultraviolet ziyingozi?
Ngaba izibane ze-UV ziyingozi? Iimpendulo ezimnandi! Ngokukodwa malunga nezibhedlele, apho amagumbi ane-disinfected nge-ultraviolet light - ngokubanzi umlilo !! Izibane ze-nail ze-UV zikhuselekile. Isibuko semitha kuzo asifani nakwi ...
kunceda ukufumana imibongo yokuzalwa komfundisi weklasi
Ndincedisa ekufumaneni imibongo yosuku lokuzalwa kotitshala malunga manicure malunga manicure! Siyavuyisana notitshala weklasi! Sikunqwenelela amathamsanqa, ukuze yonke imisebenzi isonjululwe! Ukuze wonke umntu akuqonde, Ungaze ukhubeke, Ukuthanda ngokunyanisekileyo, Kakhulu ...
Khuphaza nceda ukuba kuyimfuneko ukumisa i-primer kwisibane kunye nokuba ungakanani ixesha lokusebenzisa i-biogel kwisipikili?
Nceda undixelele ukuba ngaba i-primer ifuna ukomiswa kwisibane kwaye ithatha ixesha elingakanani xa ufaka i-biogel kwisikhonkwane? I-1) Akukho sidingo sokomisa i-primer, 2) ii-biogels zihlala azidingi kusebenza kwangaphambili ...
Indlela yokulahla i-burrs kwiminwe yakho? ... Fudumeza ioyile kwisitya esincinci kwaye udibanise izandla zakho kuyo. Gcina ide iphole ioyile. Vumela i-oyile idreyini, nxibe iiglavu zomqhaphu kunye ...
Ukuqala okanye umda? Ingaba amantombazana kufuneka asebenzise i-primer kunye ne-bender yeentambo ze-gel? Ngaba ezi zixhobo ze-2 ziyimfuneko? Ukuba
Primer okanye Bonder? Ngaba amantombazana kufuneka asebenzise i-gel nail primer kunye ne-bonder? Ngaba ezi zinto zimbini ziyafuneka? Ukuba iPrimer- ise-Afrika- i-primer yiasidi ethi ...
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-3,932.